Tekinoroji Yekubudirira Kwekutengesa Kugonesa | Martech Zone
Muvhuro, April 15, 2013 Wednesday, May 21, 2014 Jenn Lisak Golding
Munyika yanhasi, tekinoroji uye kugoneswa kwekutengesa kunoenderana. Zvakakosha kuti iwe uratidze zvaunotarisira zviitwa kuitira kuti uzviite seinopisa kana yakapfava inotungamira. Ndeapi tarisiro ari kusangana neako marashi? Ivo vari kudyidzana neako brand? Ndeapi maturusi auri kushandisa kuteedzera izvi?
Takashanda pamwe chete nesu mutengesi wekutsvaga mutengesi, TinderBox, kugadzira infographic nezve akasiyana maturu nemaitiro anoshandiswa nemakambani kuti akwanise uye kuteedzera zvinotungamira. Kunyangwe hazvo fanera yekutengesa iri kuchinja, kuchine zvimwe zvikamu zvakasiyana panguva yekutengesa kutenderera: Kushambadzira & Kutengesa, Prospecting, Kufanirwa, Kusimbisa, Kutaurirana, uye Kuchinjika. Maitiro acho anogona kunge asiri akaenzana, asi matanho aya akakosha pakuvhara kutengesa.
Ndeapi eaya maturusi auri kushandisa kupfupisa yako yekutengesa kutenderera? Uri kuumba sei mikana yechikwata chako maererano nekutengesa kugoneswa? Kushandisa maturusi akakodzera kunokubatsira kuenda kune "kutengesa goridhe."
Freebase: Dhatabhesi reVanhu, Nzvimbo kana Zvinhu
Apr 17, 2013 pa 6: 54 AM
“Ndeipi yemidziyo iyi yauri kushandisa kupfupisa kutenderera kwako kwekutengesa? Uri kugadzira sei mikana yechikwata chako maererano nekugonesa kutengesa? Kushandisa maturusi akakodzera kunobatsira kuti usvike “pakutengesa goridhe.”
Handina kukwanisa kubvumirana newe zvakanyanya. Kushandisa maturusi akakodzera - uye ndinofanira kutaura kuashandisa nemazvo - kunogona kukuchengetedza nguva yakawanda uye kuita kuti basa rako rinyanye kushanda. Nekudaro, dambudziko neizvi nderekuti vanhu vazhinji havagone kushandisa maturusi aya kana kuti vari kuashandisa zvisina basa.
Apr 17, 2013 pa 3: 08 PM
Ndatenda nemhinduro yako, Anne! Ndinobvumirana newewo. Ini ndinofunga kushandisa maturusi nemazvo idambudziko mazuva ano - vanhu vanovhiringidzika kana kusatora nguva yekudzidza. Naizvozvo, unogona kunge uchirasikirwa nemikana yakawanda yakasiyana.
Apr 18, 2013 pa 2: 09 AM
ya jenn kushandisa maturusi zvinobudirira ibasa hombe izvozvi, yakanaka tsananguro tanq
Apr 18, 2013 pa 3: 09 AM
Ndinofarira sei DK New Media ishamwari neTinderbox uye iyo infographic inoratidza Tinderbox 300% kupfuura chero chishandiso chiri pano. Ndinoshamisika kuti mangani mamwe maturusi ari pano akabatana nawo DK New Media uye Tinderbox. Zvakanyanya here kutarisira maonero akazara ekushambadzira / kutengesa software yatiinayo?
Sep 22, 2014 pa 11: 16 AM
Ini ndinoda infographic, Jenn. Zvakanyatsoitwa- zvirinani kubva pakuona kwemumwe munhu anga ari mumasilos ese echeni yekuda. Ini ndinobvumirana nezvakataurwa pamusoro apa- vanhu vari kubuda muchikamu chekugamuchirwa chezvishandiso izvi.
Sep 22, 2014 pa 11: 22 AM
Ndatenda, Brian! Ndinotenda pfungwa dzenyu. Ini ndinofunga kune akawanda maturusi kunze uko zvekuti zvakaoma kuziva zvauri kutsvaga kana izvo zvavanofanira kunyatso kushandisirwa. Icho chichava chinhu chakakosha kufunga nezvacho kubva pakuona kwechiratidzo, uko makambani anofanirwa kukwanisa kunyatso kutsanangura izvo zvavanogona / zvinofanirwa kushandiswa. Uye, kune rimwe divi remari iyoyo, vashandisi vanofanirwa kuziva zvavanoda zvakare kuti vasaise mari mune chimwe chinhu chisingazotsigire chinangwa chavo pakutanga.